Kukho nezinye iimpawu eziliqela ukuba umsebenzi impembelelo namandla-unikezelo. Phakathi kwezi abo baqeshwe ukukhusela unikezelo, ezidweliswe ngezantsi.
Coil : A imo ukungaphumeleli okubangelwa output nomthwalo ngoku mkhulu kuno athile. Oku limited yi ulwenzeko iphezulu yangoku umbane kunye ezilawulwa kwiisekethe yokhuseleko lwangaphakathi. Kwakhona konakalise unikezelo amandla kwezinye iimeko. Iziphaluka Mfutshane phakathi imveliso amandla-unikezelo nesiseko ingadala nemisinga ngaphakathi kwinkqubo yokuba kulinganiselwe kuphela amandla ubuninzi zangoku ukuvimba lwangaphakathi umbane. Ngaphandle umda, le yangoku aphezulu kunokubangela nobushushu kwaye zingonakalisa unikezelo lwamandla kwakunye umthwalo kunye interconnects yayo (imizila ibhodi wesekethe eziprintiweyo, iintambo). Ngoko ke, inkoliso unikezelo lombane kufuneka zibe umda (ukhuseleko uphuphumalo) olwenza ukuba imveliso yangoku idlula esicaciswe.
Overtemperature: A lobushushu elingaphezu ixabiso elikhankanyiweyo umbane kufuneka ingathintelwa okanye kunokubangela umbane-unikezelo. Iqondo lobushushu yokusebenza kakhulu kunokonakalisa umbane kunye neziphaluka enxulumene kuyo. Ngoko ke, izinto ezininzi zisebenzisa woluvo lobushushu neesekethe ezinxulumene nazo ukukhubaza unikezelo ukuba kwithempritsha yayo yokusebenza idlula ixabiso ethile. Ngokukodwa, semiconductors asetyenziswe unikezelo ayachaphazeleka lobushushu kwamandla azo ekhankanyiweyo. Izinto emininzi iquka ukhuseleko overtemperature ukuba sivala unikezelo ukuba ubushushu lugqithe ngaphaya umda ekhankanyiweyo.
Overvoltage: Le imo ukungaphumeleli kwenzeka ukuba ombane yemveliso iya ngaphezu ixabiso dc elikhankanyiweyo, nto leyo abeke dc ombane kakhulu ukuba yonakalise kwiisekethe umthwalo. Ngokuqhelekileyo, imithwalo inkqubo yekhompyutha ukumelana ukuya kwi-20% overvoltage ngaphandle kokuya umonakalo ngokusisigxina. Ukuba olu ingqalelo, khetha kunikezelo enciphisa lo mngcipheko. Izinto emininzi iquka ukhuseleko overvoltage lowo jika unikezelo off ukuba ombane imveliso idlula isixa esithile. Enye indlela umgqala zener diode uziphatha ngoku ngokwaneleyo embundwini overvoltage ukuze iyazingenela yangoku amandla-unikezelo umda kwaye avale phantsi.
Soft Start: Inrush kwesithintelo yangoku kusenokufuneka xa amandla okokuqala okanye xa iibhodi ezintsha shushu eziplagwe. Ngokuqhelekileyo, oku kuzuzwa kwisiphaluka athambileyo-isiqalo anciphise ukunyuka lokuqala ngoku koko ivumela umsebenzi oqhelekileyo. Ukuba washiya lunganyangwa, lo inrush langoku generate incopho eliphezulu bamthethela umgcini ngoku ukuba iimpembelelo le ombane kwimveliso. Ukuba le nto ke yinto ebaluleke, khetha ubonelelo ngale phawu.
Undervoltage utshixelo lwe-akhawunti: Ayaziwa njengoko UVLO, ke yona unikezelo xa ifikelela ombane aphezulu Igalelo ngokwaneleyo kwaye sivala unikezelo ukuba ombane igalelo iwela ngaphantsi ixabiso ethile. Olu phawu isetyenziselwa izinto ukusebenza ngamandla eluncedo kwakunye namandla ebhetri. Xa esebenza ngamandla ibhetri-based UVLO likhubaza umbane (kwakunye nenkqubo) ukuba iphiko battery kakhulu kangangokuba sihlisa unikezelo ngayo igalelo ombane aphantsi kakhulu ukuze kuvumeleke operation oluthembekileyo.
Kagesi soGuquguquko (EMC): Ibandakanya Abantu iindlela zoyilo ukunciphisa uphazamiseko magnetic (EMI). Xa izinto amandla utshintsho-imowudi, amandla ombane ayi dc aguqulwa ukuya wagawulwa okanye amaza idaleka. Oku kubangela ukuba unikezelo lombane lokuvelisa emxinwa-band ingxolo (EMI) kwi angundoqo njalo ziguquka kunye harmonics ezihamba naso. Ukuze ziqulathe ingxolo, abenzi kufuneka ukunciphisa ezikhutshwayo obuphumayo okanye ziqhutywe.
abavelisi Power-unikezelo ukunciphisa EMI radiation ngokuthi lokunithumelela le unikezelo kwibhokisi yesinyithi okanye kwisipreyi yokutyabeka kwenzeka izinto sisinyithi. Abavelisi Kwakhona kufuneka sinikele ingqalelo ubeko lwangaphakathi unikezelo kunye iintambo ohamba ngaphakathi nangaphandle yobonelelo, nto leyo ingxolo.
Uninzi uphazamiso lwenziwe kumgca samandla kusisiphumo engundoqo utshintshe nje transistor okanye output rectifiers. Ngokulungiswa amandla-factor kunye noyilo olufanelekileyo sombane, uqhagamshelo lwe esinkini ubushushu, kunye noyilo lwecebo lokucoca, umenzi amandla-beze ukunciphisa kuqhutywa uphazamiseko ukuze beze ukufikelela EMI imvume arhente zolawulo ngaphandle kokuya ngokugqithiseleyo iindleko lokucoca ulwelo. Soloko ukhangele ukuze ubone ukuba umenzi amandla-unikezelo igcwalisa imfuno zemigangatho EMI yolawulo.